တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Wang Yi အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ – ၁၉
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အရေးကိစ္စများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေမှန်ကိုသိရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ရပ်တည်ထောက်ခံပေးသည့် အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Wang Yi အား ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက်ဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီးက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအားဥပဒေနှင့်အညီ ပြန်လည်လက်ခံရေး ဆိုင်ရာကိစ္စများကို အကြံပြုတိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် အခြေအနေမှန်များအား နိုင်ငံတကာမှ သိရှိအောင်ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ခိုင်မာသည့် ဆက်ဆံရေးမှတစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ခိုင်မာတိုးတက်ကောင်းမွန်မှု အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang နှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့် အတူစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသည်။
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ – ၁၉
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး အစှနျးရောကျ ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျသမားမြား၏ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားနှငျ့ နောကျဆကျတှဲဖွဈပျေါခဲ့သညျ့ အရေးကိစ်စမြားတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၏ အခွအေနမှေနျကိုသိရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံဘကျမှ ရပျတညျထောကျခံပေးသညျ့ အတှကျကြေးဇူးတငျရှိကွောငျး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Wang Yi အား ယနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့စဉျထညျ့သှငျးပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျဧညျ့သညျတျောဝနျကွီးက ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး တညျငွိမျအေးခမျြးမှု ထိနျးသိမျးနိုငျရေး၊ ဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး လုပျငနျးမြားဆောငျရှကျနိုငျရေး၊ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံသို့ထှကျခှာသှားသညျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြားအားဥပဒနှေငျ့အညီ ပွနျလညျလကျခံရေး ဆိုငျရာကိစ်စမြားကို အကွံပွုတိုကျတှနျးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးဖွဈပှားလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမှေနျမြားအား နိုငျငံတကာမှ သိရှိအောငျဆောငျရှကျသငျ့သညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ တညျငွိမျ အေးခမျြးရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုတိုးတကျရေး လုပျငနျးမြားဆောငျရှကျရာတှငျ တရုတျနိုငျငံမှ ကူညီ ဆောငျရှကျပေးမညျ့ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျခိုငျမာသညျ့ ဆကျဆံရေးမှတဈဆငျ့ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေး ခိုငျမာတိုးတကျကောငျးမှနျမှု အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက တရုတျနိုငျငံခွားရေး ၀နျကွီးအား အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးပေးအပျပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့ အတူစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွပါသညျ။